Pretargeting mifanohitra amin'ny Retargeting | Martech Zone
Pretargeting mifanohitra amin'ny Retargeting
Alatsinainy, 11 Jona, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Azonao atao ny mahatsikaritra aorian'ny fitsidihanao tranonkala iray manokana fa manomboka mahita dokambarotra amin'ny tranonkala hafa momba azy ireo hatrany ianao. Tsy kisendrasendra izany. Ny rafitra toa ny Google Adwords dia mampiasa a cookie an'ny antoko fahatelo izay ahafahan'izy ireo mahita rehefa mitsidika tranokalan'ny dokam-barotra ianao ary avy eo manaraka anao rehefa mitsidika tranonkala hafa miaraka amin'ny doka. Ny retargeting dia tena mahomby ary mitarika amin'ny taha ambony amin'ny fiovam-po miaraka amin'ny vidiny ambany isan-tsindry. Zahao amin'ny a mandoa isaky ny matihanina matihanina raha tsy nanararaotra azy ianao.
Ny mety tsy takatrao anefa dia misy teknika ihany koa hamantarana ireo tranonkala tadiavin'ny olona alohan'ny hahatongavany any aminao. Antsoina hoe Pretargeting izy io ary nohazavaina amin'ity sary ity avy amin'ny Pretarget. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha mitsidika tranokala manokana ny olona alohan'ny hahatongavany amin'ny tranokalanao, dia mila fantarinao fotsiny hoe inona ireo tranonkala ireo ary dokao aminy.
Tags: Sary torohaypretargetmody faninaretargeting
Manompoa ny marikao amin'ny alàlan'ny horonan-tsary miresaka